Kedu mgbe Hermione nwetara ezé ya? - Magazin ADL ➡
Kedu mgbe Hemọn mere ka ezé ya dozie?
Ndị nhazi ADLmag
Dị ka akwụkwọ, Hermione Granger nwere 'oke ntutu isi na nnukwu ezé dị n'ihu' (ruo mgbe, mgbe Draco Malfoy gbasịchara ya na The Goblet of Fire, ọ na-ahapụ Madam Pomfrey belata ezé ya ntakịrị karịa ka ha dị na mbụ).
Naanị, ị bụ onye si Harry Potter?
Anyị agaghị belata ị nye otu Harry Potter agwa. Ọ dịcha ka ị na-adịghị kpọmkwem dị ka Harry, ma ọ bụ ikekwe ị nwere ụdị Albus Dumbledore nke nwere ọdịdị na mkpuchi nke Hermione Granger.
Hermione ọ na-eyi ugegbe na akwụkwọ? Hamis nne na nna bụ eze. O nwere oke aja aja na-agba agba ntutu, ya kpọọ iko na adighi aru, ma obughi 'Oh chim ihe o mere'. Hamis ezigbo enyi bụ Harry na Ron. Na nke anọ akwụkwọ, Hermione na-agbanwe ya anya maka otu abalị na Yule Ball.
27 Azịza nke Ajụjụ Ndị Ọzọ Yiri
Ndi nne na nna Hermione chetara ya?
Kedu ihe kpatara ha ji mee uwe Hermione dị ka pink?
Gịnị kpatara Hermione na Gryffindor na ọ bụghị Ravenclaw?
Hermione ọ na-eji ihe ntecha?
Kedu akpụkpọ ụkwụ Hermione na-eyi?
Kedu agba bụ ntutu Hermione?
Kedu ka Hermione si eyi akwa ya?
Hermione ọ na-eyi ugegbe na akwụkwọ?
Kedu ka Hermione Granger si eyi ntutu isi ya?
Kedu ihe bụ Hermione?
Ndi dibia afa na-eyi akwa n'okpuru uwe ha?
Etu esi eme akwa Voldemort?
Kedu ka ị si eji ejiji maka Harry Potter?
Etu esi eme akwa ejiji?
Ego ole bụ uwe Gryffindor?
Ndị dibịa afa na-eji okpu?
Gịnị mere ha ji kwụsị iyi uwe na Harry Potter?
Harry Potter nwere teepu na iko ya?
Kedu ihe ị na-eyi n'okpuru uwe Harry Potter?
Pasent ole bụ Hermione?
Kedu ihe ụmụ akwụkwọ Hogwarts na-eyi n'okpuru uwe ha?
20 Hermione hụrụ Ndị mụrụ ya Ma weghachite ha
Ha mere nlezianya dị mkpa na maka Hermione nke ahụ pụtara ịgbanwe ya Mwepu nne na nnancheta. O mere ka ha kwenye na ha bụ Wendell na Monica Wilkins, bụ di na nwunye na-enweghị nwa nwanyị, na-achọkwa ịkwaga Australia.
The ejiji pink bụ mkpụmkpụ, ma na-egosi onye na-agụ Movie ahụ Hermione na-apụ na mpaghara nkasi obi ya. Ọ dịkwa mma ịmara na ndị na-eme ihe nkiri mere agbara na DH. Akwụkwọ Hermione na-ebu lilac uwe gaa agbamakwụkwọ Bill. Ebe ndị na-ese ihe nkiri yi ya uwe na-acha uhie uhie, nke nwere ike ike karịa.
Hermione is Uchechukwu, Ron bụ Hufflepuff, na Harry bụ Slytherin. Ha niile nọ gryffindor n'ihi na ha jụrụ. Sda okpu tinye ya n'ime gryffindor n'ihi na o nwere àgwà nke a gryffindor n’ime ya, ịtụkwasị ya n’ụlọ ahụ nwere ike ịkpọpụta ha.
Hermione na-eme echela oke egwu banyere ọdịdị ya, yabụ cheta na ọ bụ ụdị mmadụ gị ka ọ dị mkpa - n'agbanyeghị ihe ị bụ -eyi ma ọ bụ otú i si ele anya. Agbanyeghị, ntọala ọkụ, egbugbere ọnụ, mkpuchi anya na agwa na mascara nwere ike ime ka atụmatụ gị pụọ iche n'eleghị anya oke.
-eyi oji ma obu aja aja akpụkpọ ụkwụ n'ụdị dị mfe, dịka Mary Janes ma ọ bụ achịcha. -eyi Uwe. Nwere ike ịchọta otu na ụlọ ahịa agụmakwụkwọ, ụlọ ahịa ejiji, ma ọ bụ ụlọ ọrụ ebere na ụlọ ahịa na-ere ahịa. Naanị jide n'aka na ịchọta otu n'ime ọnọdụ mara mma, dịka Hermione agaraghị akpa ma ọ bụ eyi Uwe mgbokwasị.
Hamis nne na nna bụ eze. O nwere oke aja aja na-agba agba ntutu, ya kpọọ iko na adighi aru, ma obughi 'Oh chim ihe o mere'. Na nke anọ akwụkwọ, Hermione na-agbanwe ya anya maka otu abalị na Yule Ball.
Na April 16, Hermione bụ nke otu ugwu na-awakpo na Hogwarts. Harry na Fred na George Weasley bịara nyere ya aka. Ha na-alụ ọgụ ma na-egbu troll ma Hermione anwụ nke mmerụ ahụ ya.
ebe ọ bụ na Hermione bụ ụdị nwa agbọghọ ọ bụla, ntutu ya usoro nlekọta ga- nwere ike ọ ga - ejedebe na ị na - agba agba site na mkpọchi mkpuchi, ọ ga - amasị ya -eyi ọ na-adabara ala ma ọ bụ na-enweghị uche weghachite azụ.
Hemọn Granger's wand bụ 10¾ ”ogologo, mere nke vine osisi, ma nwee a dragon isi obi. Emebere wand a Garrick Ollivander oge tupu agụmakwụkwọ Hermione na Hogwarts School of Witchcraft and Wizardry.
N'ime usoro a, Harry A kọwara dịka inwe ntutu ojii na-adịghị mma n'anya nna ya, anya ya na-acha akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ, yana àmụmà nke yiri àmụmà n'egedege ihu ya. A kọwakwara ya dị ka "obere na taa maka afọ ndụ ya" yana "ihu dị gịrịgịrị" na "ikpere na-ada ụda", ọ na-eyukwa anya ugogbe anya.
One of Hamis Uwe a kacha mara amara bụ hoodie pink ahụ o yi na jeans Harry Potter na onye Mkpọrọ nke Azkaban. Ọ bụ akụkụ nke otu ọhụụ nke Muggle uwe n'ihi na Harry, Ron, na Hermione iji mee ka ha dị ka ndị na-eto eto ndị nwere ike ịkọwapụta karịa ndị sitere na ụwa efu.
Iji mee akwa uwe nke Voldemort, soro usoro ndị a.
Kpebie ụdị nke Voldemort ga-eji. Tom Riddle, nwa okorobịa Lord Voldemort bụ nwoke mara mma, ọ bụrụ na oyi na-atụ.
Yiri uwe ojii.
Mimic Voldemort mkpịsị aka ogologo.
Gaa ntutu na-enweghị ntutu.
Buru otu nkpa-n'aka.
Lezienụ anya maka nkọwa.
1 usoro Uwe dika Harry Potter
Yiri uwe mwụda ojii na uwe elu ọcha.
Yiri uwe ojii ochie.
Lee ụlọ akwụkwọ gụsịrị akwụkwọ na-ere gowns agụmakwụkwọ.
Zoo ogologo ntutu n'okpuru okpu.
Mee otu iko “mebiri emebi”.
Mee akwa uhie na ọla edo.
Mee eriri uhie na ọla edo.
See ihe mkpuchi àmụmà.
Kpoo akwa ohiri isi site na iji uzo.
Jiri akwa ohiri isi nke adịworị adị, ọzọ.
Bechaa oghere maka isi gị na ogwe aka gị.
Tinye rips ma ọ bụ oghere na pillowcase.
Buru sock dika ihe nkwado.
Yiri uwe na-adabaghị adaba dị ka ihe ọzọ.
Gaa ụkwụ ọtọ ma ọ bụ yi akpụkpọ ụkwụ nwere agba anụ.
O doro anya naanị Uwe na uwe ime akwa, yana uwe mwụda n'oge oyi (jiri ọlaọcha na-etinye IIRC) - ikekwe ha nwekwara -eyi okpomọkụ na oyi ma ọ bụ ihe ọ bụla, ọ bụ ezie na akwụkwọ na-abụkarị do eme mkpesa na nnukwu ụlọ ahụ dị oke oyi n'oge oyi.
One uwe emere ya na aji ojii nke nwere nkpacha uhie iji gosi ntinye, ma buru ezigbo akwa gryffindor ejiri. A na-ekpuchi ihe mkpuchi ahụ na ihe na-acha uhie uhie. Ọ dị ezigbo mma maka ego ahụ.
Ị chekwaa: $ 10.10 (29%)
Ee, wizards nwere ike yikwasị uwe & isi. A na-atụle ha uwe ihe. A ọkachamara (ma ọ bụ onye ọ bụla ọzọ) nwere ike -eyi ihe ọ bụla uwe ha na-amasị ha.
Na akwụkwọ, enwere enweghị isi ọ bụla wizards yi ihe ọ bụla n’okpuru uwe mwụda ha ndị ọzọ karịa ndị na-agba ume (ma ọ bụ na oke ikpe ọ nweghị ihe ọ bụla). Ogbe mpe eyịride na-ekpudo ihu na ihu na ikuku, uwe ya na-ada ya isi iji kpughee akpịrịkpa ụkwụ na-ada ụkwụ na akpụkpọ isi awọ.
N'ezie na akwụkwọ ha do -eyi muggle uwe n'ihi na ọ ga-abụ weir ma ọ bụrụ ha yi Uwe n’ihu ọha. Ọzọkwa, ha na-na a chọrọ ka -eyi yunifọm n’ọ́bá akwụkwọ mgbe ha na-agụ akwụkwọ, nnukwu ụlọ nzukọ, yana mgbe ha na-aga / n’oge klaasị. N'oge ha n'efu ha nwere ike -eyi uwe ha mgbe nile.
Harry na-ebu iko. Dudley na-agbaji ha ugboro ugboro karịa afọ ndị gara aga Harry zipụrụ ndị Hogwarts na nke mbụ ya, ha ejiri ya teepu. Emechaa enyo anya ya mebiri emebi site na ya njem mbụ nke Floo Powder, Arthur Weasley rụziri ha maka ya site na iji Mending Charm nkịtị (CS4).
N’akwụkwọ ndị ahụ, e nweghị ebe ndị a maara aha ndị amoosu yi ihe ọ bụla n'okpuru ha Uwe ndị ọzọ karịa ndị na-agba ume (ma ọ bụ na oke ikpe ọ nweghị ihe ọ bụla). Snape na-agbadata ala n'ikuku, ya Uwe daa n'elu isi ya iji kpughee akpịrịkpa ụkwụ na-ada mbà na otu isi awọ.
ị bụ 54% Hermione Onye na-eri ihe! ị dị ezigbo mma n'ụlọ akwụkwọ ma nwee mmasị ịrapara na akwụkwọ, mana ị agaghị adị oke ka nwa anyị nwanyị H. ị gbatara si! ị bụ 87% Hermione Onye na-eri ihe!
akwụkwọ na akwụkwọ, etemeete na ngwa, ụdị na ejiji, akwụkwọ ndị okenye
Kedu ihe bụ awa 4 na nkeji 30 na ntụpọ?
Kedu ka ị si etinye osisi na nkụ na-enweghị egwu?